ALOPECIA EE DIGAAGGA: SABABTA OO AH DIGAAGGA U TAGAAN KOOFIYAD IYO WAXA LA SAMEEYO - BEERAHA DIGAAGA
Waa maxay sababta ay digaagga u baxaan iyo sida loo daweeyo
Si loo daaqado digaagga waa wax sahlan oo faa'iido leh. Digaagkani wuxuu noqon karaa ilaha dakhliga ama si gaar ah loogu koro baahida qoyska. Iyadoo aan loo eegin ujeedada ay ku bilaabi karaan digaagga, milkiilayaashooda marwalba waxay la kulmaan dhibaatooyin. Mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu caansan waa luminta xayawaanka xoolaha. Waxaan ka hadli doonnaa waxa keena kicinta digaagga, sida looga hortago iyo loo daaweeyo.
Waa maxay cudurkan?
Dhimashada oo dhamaystiran ama qayb ka mid ah boogaha waxaa lagu magacaabaa alopecia. Xitaa haddii shimbirku uusan gebi ahaanba dhicin, baalasha haray waxay noqdaan kuwo jajaban, caajis ah, oo ay ku lumiyaan mooska.
Waa muhiim! Hilibka iyo ukunta hilibka-ukunta ayaa aad ugu badan inay ku dhacaan alopecia marka loo dhigo digaagga. Tani waa in la tixgeliyaa marka la qorsheynayo guri.
Waa maxay sababta digaagadu u baxaan
Cudurku wuxuu ku dhici karaa dhowr sababood:
Inta badan shimbirta waxay bilaabataa inay koraan koofiyado leh cunto aan habooneyn oo aan dheellitirnayn. Fitamiin A iyo fitamiino ka mid ah kooxda B, iyo sidoo kale macro-iyo mareegyo kala duwan (calcium, sulfur, iodine, cystine, manganese iyo fosfooraska) si xun u saameeya moolka;
Xaaladaha aan nadiif ahayn ee guriga hargabka;
la'aanta qoraxda iyo iftiinka macmalka;
qoyaan badan ama hawo qalalan;
xaaladaha heerkulka aan wanaagsanayn ee guriga;
dhaawacyada nacaybka ee xayawaanka (fluff ama peroedy);
la'aanta hawo nadiif ah (aan lugeyn).
Cudurku wuxuu isu muujiyaa sida soo socota:
Tufaaxu waxay ku dhacaan daboolka iyo dhabarka.
Barta xayawaanka ku jirta ayaa ku jirta xabadka, qoorta iyo madaxa shimbirta.
Dhaawaca maqaarka ku jira dabada, qoorta iyo dhabarka.
Waxa la sameeyo
Waxyaabaha ugu muhiimsani maaha inay bilaabaan cudurka, maadaama shimbiruhu ay lumiyaan dharkooda intooda badan (ilaa 90%). Qaadashada baaritaanka waqtigeeda iyo daaweynta haboon waxaa jiraya fursad lagu badbaadiyo oo dib loogu soo celiyo baadad. Sidaa darteed, waa muhiim inaad si dhaqso ah u dhaqanto marka calaamadaha ugu horeeya la ogaado. Natiijooyin degdeg ah oo wax ku ool ah, waxaa lagama maarmaan ah in la hagaajiyo nafaqada, lagu hagaajiyo shuruudaha shimbiraha iyo ka takhalusaan dulin.
Waa muhiim! Si digaagadu u xanuunsan oo si fiican u duulaan xilliga qaboobaha, nalalka ultraviolet ee guriga waa in ay gubaan 6-8 saacadood maalintii. Xilliga xagaaga, shimbiruhu waa inay waqti badan ku qaataan dibedda, iyagoo helaya cunadooda. Socodku wuxuu ka caawiyaa inuu jirka ku daro vitamin D iyo xoojinta nidaamka difaaca jirka.
Nafaqada haboon iyo miisaamanba waa muhiim. Calaamadaha ugu horreeya ee jirrada, waa inaad gashaa cuntada oo lagu daro macdanta digaaga, taas oo laga iibsan karo farmashiye xoolaad. Waa inaad sidoo kale ku dartaa dhiigga cuntada iyo cuntada hilibka-lafaha, kaabajka cagaarka iyo sprouts.
Alaabooyinkaas oo dhan waxay leeyihiin sulfur sarreeya, sidaa daraadeed waa lagama maarmaan u ah alopecia. Intaa waxaa dheer, waxaa faa'iido leh in lagu quudiyo xayawaanka la cuno bacaha, cusbada glauber iyo baaruud. Joogitaanka dufanka ee cuntada waa in la yareeyo, laakiin xaddiga borotiinka, liddi ku ah, waa in la kordhiyaa.
Ku soo dhawow sifooyinka cuntooyinka dheelitiran ee digaagga.
Waa inaad sidoo kale ka walwashaa kalsiyum, sababtoo ah waa lagama maarmaan ma aha oo kaliya lafaha iyo guluubka, laakiin sidoo kale sameynta duufaan. Kalsiyum waxaa ku jira alaabooyinkaas oo kale sida nuuraanta, gypsum, tricalcium phosphate ama phosphate monocalcium. Xalka ka soo baxa iodine ama potassium, kaas oo shimbiruhu u baahan yihiin inay bixiyaan 2 maalmood oo kasta, ayaa sidoo kale loo arkaa mid wax ku ool ah. Waxaa sidoo kale lagula talinayaa in lagu daro vitamin B12 si loo siiyo cirbadeynta ama cirbadeynta. Iska hubi in digaagga naftooda is ilaaliyaan, maadaama cunto la'aanta ay tahay mid ka mid ah sababaha suurtagalka ah ee alopecia.
Ma taqaanaa? Beerka reer Iswiidhan Avikdor Kohaner wuxuu shaqeeyay in ka badan 20 sano si uu u kiciyo digaagga digaagga oo aan dhammaystirnayn boomaato oo uu u soo bandhigay dunida 2002-dii. Ilkaha baldigu waxaa loogu talagalay beerista jawi kulul, waxay si aan toos ahayn u saameynayaan dulin, mana ubaahnayn in la riixo ka hor inta aan loo isticmaalin cunto.
Guriga digaagga waa inuu noqdaa mid nadiif ah, diiran oo hawo wanaagsan leh. Guriga digaaga, waa lagama maarmaan ma aha oo keliya in lagu ilaaliyo nadaafadda, laakiin sidoo kale si joogto ah u nadiifin adoo isticmaalaya kiimikada, waxaadna u baahan tahay inaad wax ka qabato wax walba: dabaqa, derbiyada, xajka, weelasha biyaha iyo quudinta, hudheellada iwm. Haddii shimbirta la duubo oo luguhu aanay suurtagal ahayn, waxaa lagama maarmaan ah in la qalabeeyo coop buska leh laydhka UV kaas oo kaa caawin doona kahortagga fitamiin D yarida.
Baro sida loo sameeyo cabitaan cabid iyo nuujin leh gacmahaaga, iyo sidoo kale sida loo abuuro dabacsanaan iyo hoolka hudheelka digaagga.
Iska ilaali dulin
First of all, waxaad u baahan tahay inaad ka takhalusi jiirka iyo jiirarka ee coop digaag (haddii ay jirto). Kadibna shimbirta waa la kormeeraa (isticmaal gacmo gashi). Jiritaanka dulinka waxaa lagu tilmaamaa buunshaha oo u eg dunta suufka iyo cayayaanka. Haddii hudheelladaas ama waxyaabaha qashinka ah ee cayayaanka la helay, waa in laga saaraa oo digaagga lagu daaweeyaa diyaar garow gaar ah, tusaale, isticmaal Iwomek ama Frontline.
VIDEO: WAXYAALAHA BADBAADINTA BADAN EE BOOQASHADA
Ujeedooyinka ka hortagga ah, baadadaha saldhigga waxaa lagu dhajiyaa saliidda cuntada, iyo sidoo kale weelasha waxaa lagu rakibay guriga iyagoo leh ash, si ay digaagu u dhaqaan oo ay u nadiifiyaan nadiifinta.
Waxaan kugula talineynaa inaad barato sida ay ula macaamilaan dulinyada digaagga: sida loo saaro gooryaanka iyo sida loo daaweeyo coccidiosis ee digaagga.
Sida loo daweeyo
Ka sokow hagaajinta tayada cuntada iyo xaaladaha nolosha, waxaad u baahan doontaa daaweyn, kaas oo la samayn karo iyada oo la adeegsan karo daawooyinka daawooyinka iyo daaweynta dadka.
Si loo wanaajiyo difaaca iyo dib u buuxinta kaydka fitamiinada iyo macdanta, waxaa lagu siiyaa quwada fitamiinada iyo waxyaabaha kale ee lagu daro sida Chiktonik, Ganasupervit, Gamavit iyo Oprerin. Ka saar nabarrada meelaha baaluqa ah waxay kaa caawin doonaan "Desi buufin." Ma noqon doonto mid aad u macquul ah si loo daweeyo mid kasta oo hen leh 10-15 g oo ah budada-kicinta.
Waxaa jira cuntooyin caan ah oo lagula dagaallamo alopecia. Tusaale ahaan, waxaad soo ururin kartaa baadadihii ka soo dhacay shimbiraha, iyaga oo si fiican u dhaq, qallalan, qaawi oo ku dar quudinta. Goobaha hoose iyo geedaha xoolaha ayaa sidoo kale loo tixgeliyaa waxtar. Burka noocan oo kale ah ayaa lagu daraa cuntada shimbiraha, si loo buuxiyo kaydka fitamiinada iyo macdanta jirka.
Ma taqaanaa? Daaweeye ka soo jeeda Maraykanka ayaa lagu naqshadeeyay Wonder Mike muddo 18 bilood oo aan madaxa lahayn, laakiin keliya hal dheg dheg iyo maskaxda maskaxda ah. Milkiilaha ayaa ka dhigay xiddiga dhabta ah ee America, isla mar ahaantaas isaga oo quudinayay tubada caanaha iyo badarka, sidoo kale wuxuu joojiyay inuu cun-gacmihiisu la geliyo sirinjo.
Sida looga hortago
Tallaabooyinka ugu muhiimsan ee ka hortagga ah waxaa ka mid ah tallaabooyinka soo socda:
Raacitaanka shuruucda nadaafadda shimbiraha, iyo sidoo kale ilaalinta nadiifinta guriga hoyga.
Xaqiijinta xaaladaha nololeed ee wanaagsan ee kvochek (heerkulka, qoyaanka, helitaanka booska socodka).
Cunto kala duwan oo dheellitiran, taas oo dhab ahaantii u baahan tahay in la buuxiyo fitamiinada iyo macdanta macdanta, gaar ahaan xilliga dayrta-xilliga qaboobaha, marka digaagga ay si weyn u yareeyaan yaraanta.
Kordhi xaddiga cuntooyinka oo galo fitamiinada cuntada ee inta lagu guda jiro shimbiraha.
Waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo kormeer joogta ah oo xoolaha ah si loo ogaado cudurada ama dulinyada wakhtigooda.
Waxaan kugula talineynaa inaad ogaato waxa ay yihiin hababka looga hortago cudurada digaagga iyo waxa la sameeyo haddii shimbirahaagu qabteen pasteurellosis iyo cudurada Newcastle.
Hadda waxaad ogtahay waxa keena alopecia ee digaagga. Inkastoo xaqiiqda ah in cudurka uusan ahayn mid khatar ah, haddana ma fiicna inaad u oggolaato, iyo in la ogaado calaamadaha ugu horreeya isla markaaba tallaabo qaadaan.
Faahfaahin ku saabsan dagaalka ka dhanka ah digaagga xayawaanka
Sulfur wuxuu ku badan yahay cuntooyinka xayawaanka, sidaa daraadeed waxaad isla markiiba ku dili kartaa laba shimbir oo hal dhagax ah iyo labadaba borotiin iyo baaruud ama baaruud oo ku jira qaab kiimikaad. Ukunta, hilibka, kalluunka, farmaajada, rootiga waxa ku jira kumbirada ugu badan iyo borotiinka, siday u kala horreeyaan. Nadiifiyay ama xabukulada baaruudda. Foomka saafiga ah ama ku shub bakeeriga digaagga (quudinta xayawaanka) qiyaasta 70-80 mg digaag weyn.
Gooynta miro yar